Akụkọ - Gini mere Bitcoin ji dị oke ọnụ? Kedu ihe mgbanwe Bitcoin?
N'ihe dị ka narị afọ asaa tupu Sweden ewepụta akwụkwọ izizi mbụ nke Europe na 1661, China amalitela ịmụ maka etu esi belata ibu arọ nke ndị mmadụ na-ebu mkpụrụ ego ọla kọpa. Mkpụrụ ego ndị a na-eme ka ndụ sie ike: ọ dị arọ ma ọ na-eme njem dị egwu. Mgbe e mesịrị, ndị ahịa ahụ kpebiri itinye ego mkpụrụ ego ndị a na ibe ha wee nye akwụkwọ asambodo nke dabere na uru mkpụrụ ego ahụ.
Nkwupụta nkeonwe butere mmụba na onu oriri na mbelata ego: gọọmentị gbasoro ụzọ ma wepụta akwụkwọ nke aka ya nke edobere na-akwado ya, na-eme ka ọ bụrụ iwu izizi ụwa.
N'ime narị afọ ole na ole gara aga, mba dị iche iche malitere ịmalite "ọla edo", na-eji ngwaahịa ndị dị ka ọla edo na ọlaọcha na mkpụrụ ego mint nke oke ibu. Ọ na-anọchi anya otu uru ruo mgbe mkpụrụ ego mebiri, nke na-eduga na ịrị elu nke ndị nnọchi anya ego.
Anoghi ego na-ewepụta “agbụ ọla edo”, ya bụ, akwụkwọ ndekọ aha nwere ọnụ ahịa US $ 50 nwere ike gbanwere ya US $ 50 na ọla edo.
Na 1944, usoro Bretton Woods kpebiri na mba iri anọ na anọ na-aga nzukọ ahụ ga-edebe ego ha na dollar US n'ihi na ọla edo na-akwado dollar US. Nke a pụtara n’ezie na enwere ike ịgbanwe dollar US ka ọ bụrụ ọla edo n’oge ọ bụla.
Nke a pụtara n’ezie na enwere ike ịgbanwe dollar US ka ọ bụrụ ọla edo n’oge ọ bụla.
Mmetụta dị mma, mana oge adịghị ogologo. Debtbawanye ụgwọ nke ọha, mmụba ego, na uto na-adịghị mma na nkwụnye ego nke ịkwụ ụgwọ pụtara na dollar US na-enwe nrụgide ka ukwuu. Na nzaghachi, ụfọdụ mba Europe wepụrụ ọbụna na sistemụ ahụ wee gbanwere dollar US maka ọla edo. N'oge ahụ, ihe ha nwere nwere dollar karịa ọlaedo.
Na 1971, onye bụbu onye isi ala US Richard Nixon mechiri windo ọla edo wee gbanwee ọnọdụ a. Ndi ochichi mba ozo nwere oke dolla, United States na-enwekwa nsogbu maka uko edo. Ha na ndị ndụmọdụ iri na ise ndị ọzọ, ha kwupụtara atụmatụ akụ na ụba ọhụrụ iji zere onu oriri, belata enweghị ọrụ, ma gbanwee dollar US ka ọ bụrụ ihe iwu kwadoro, nke kachasị dabere na nkwenye nke ndị ọrụ ego karịa ngwaahịa na ụkpụrụ.
Ya mere, olile anya bụ ma ndị otu ọ bụla ga-anabata ego gị, nke dabere kpamkpam n'okwukwe.
Otu ihe a bu eziokwu maka Bitcoin, ihe mkpuchi a bu ihe ruru $ 19,783.06. Kedu ihe na-enye Bitcoin uru? Nkwupụta na a na-enweta ya site na nnyefe yana ọchịchọ adịghị ka ọ ga-ekpuchi ọnọdụ niile. O nweghị ntọala na ọ dịghị onye na-achịkwa ya.
Ma ọ dịkarịa ala, ịnwere ike ịdabere na ụlọ ọrụ na-ahụ maka njikwa iwu iji kwado ọnụ ahịa ego.
Bitcoin nwere njirimara nke ego iwu. Agbanyeghị, site n'ọchịchị gọọmentị, ọ nweghị onye "nwere" Bitcoin. O yiri ka ọ na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dị ka ego ego, ma usoro okike dị iche iche dị iche iche na-eme ka ndị ọkà mmụta akụ na ụba na ndị ọkachamara n'ihe banyere ego na-eche: onye na-edozi ego maka ya?
Ihe ị na-ahụ bụ 5 nke nde akara nke koodu na Bitcoin. Bitcoin bụ nke mbụ naanị puku puku ahịrị koodu, nke Satoshi Nakamoto mepụtara na 2008 wee wepụta ya na mbido 2009. Na akwụkwọ ọcha a ma ama "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" (bitcoin: A Peer-to-Peer Sistemụ Ego Eletrọniki), a kọwapụtara echiche nke Bitcoin.
Echiche mbụ ya bụ imepụta ụdị ego anaghị mkpa ịgafe ụlọ ọrụ ego n'ihi na ezoro ezo.
Nnukwu ihe ọhụrụ bụ ngwa nke teknụzụ blockchain. Ihe mgbochi ọ bụla na-anọchite anya azụmahịa na netwọk Bitcoin-karịa nkanka, ogologo oge azụmahịa ahụ ga-adịgide. Ya mere, o guzobere "agbụ", ya mere aha ya.
Iji mepụta ngọngọ, ndị na-egwuputa ihe kwesịrị iji ike nhazi kọmputa mbụ na nnukwu ọkụ eletrik iji nyochaa ịdị adị nke uru X na oge Y n'etiti azụmahịa A na B. Mgbe emere ya nkwenye, ngọngọ ahụ pụtara na azụmahịa ahụ gafere . Ndị na-egwuputa ihe natara Bitcoin dị ka ụgwọ ọrụ.
Agbanyeghị, ego dijital a enweghị uru dị na ya-enweghị ike iji ya dị ka ngwaahịa. Ndị nwere obi abụọ banyere Bitcoin na-ekwukarị na ka Bitcoin lanarị, a ga-ebu ụzọ nabata ya ma jiri ya mee ihe ndị ọzọ. Nwayọọ nwayọọ, ka oge na-aga, ọ ga-aghọ ego. Dị ka ihe atụ, ebe ọ bụ na a na-eji ọla edo achọ mma ma ọ bụ n’ihe ndị e ji kọmputa emepụta, ndị mmadụ na-echedo ọlaedo iji chebe ya.
N'ime ọrụ buru ibu nke onye Ọstrịa na-ahụ maka akụ na ụba bụ́ Carl Menger, ọ malitere ịkọwa ego dị ka “eziokwu ahụ bụ na ụfọdụ ngwaahịa aghọwo ihe a na-anakwere ebe mgbanwe.” Na ndabere nke Menger, Ludwig von Mises, bụkwa onye ọka akụ na ụba, na-ewere ego nnweta dị ka ego “bụkwa ngwa ahịa.” Mkpụrụ obi iwu bụ ego nwere “ihe nwere iru eru iwu pụrụ iche”.
"Ominal Ego ọnụ na ego, gụnyere ihe nwere iwu ruru eru pụrụ iche legal" -Ludwig von Mises Theory of Money and Ebe E Si Nweta
Echiche nke uru bụ ihe gbanyere mkpọrọgwụ n'ime ụmụ mmadụ, ọbụnadị Aristotle dere otu mgbe ihe mere ego ji achọ uru dị mkpa. Na isi, n'agbanyeghị ego ole ọ bụ, uru ya ga-esite na ya bara uru. Dị ka akụkọ ihe mere eme na-egosi na ọ dịghị ihe ọ bụla chọrọ ọnụ ahịa bara uru iji bụrụ ego, arụmụka Aristotle bụ nke a na-apụghị ịgbagha agbagha.
N’akụkụ ụfọdụ nke Africa na North America, a na-eji kichin iko eme ihe dị ka ego, ọ bụ ezie na ha egosipụtaghị obere uru dị ka ngwaahịa. Ndị Yap nọ na Pacific ji nzu nzu dị ka ego.
Ndị nwere obi abụọ banyere Bitcoin na-ejikarị arụmụka bara uru iji katọọ ịdị ike Bitcoin. O di nwute, Bitcoin bu ihe dijitalụ di iche, ya mere enwere onwe ya na nsogbu nke uwa. Ọ dịghị mkpa ka ọ pụta ụwa dịka ọla edo, ọ dịghịkwa mkpa ka ndị ọzọ nye ya ikike pụrụ iche iji mee ka ọ dị nro. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịdị ka nkọwa-Bitcoin bụ ihe ọhụrụ ọhụụ nke na-edoghị iwu ụmụ mmadụ anyị-mana ọ ka enweghị nkọwa zuru oke.
Chee echiche banyere ya: Bitcoin na fiat ego bụ usoro okike ego dị iche iche.
Fiat ego bụ nke ụwa nkịtị, nke na-eweta mmachi ego ndị ọzọ. Ike dịịrị ndị na-achịkwa ego ahụ, ụlọ akụ etiti nwekwara ike ibipụta ego karịa iji kwalite onu oriri na mgbasa. Agbanyeghị, ọ nweghị onye ga-agwa gị kpachaara anya ọtụtụ dọla na-asọpụta n’ụwa.
Onyinye ọlaedo dị oke, mana ọnụọgụ ga-emetụta ya. Ọ bụrụ na mmadụ achọpụta ọla edo buru ibu na mpụga onyinye nke ugbu a, enwere ike ịgbanwere nwe ya kpamkpam. Nmeputa ohuru na ihe sayensi nwere ike belata mkpa iji ọla edo na ngwa elektrọnik na ngwa ahia.
Thedị dijitalụ nke Bitcoin chọrọ ihe ndabere ọhụrụ. Ndị na-ahụ maka akụ na ụba amatala oke nke ọla dị oke ọnụ na ego ego. Ya mere, iwebata Bitcoin mụrụ usoro iwu ọhụrụ, nke ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ "mmalite ego okike".
Nsogbu bụ na, dị ka ndị na - eme ihe nkiri Bitcoin gwara gị, ego iwu na usoro okike cryptocurrency enweghị ike ibikọ ọnụ. Ebe ọ bụ na enweghị uru dị ka ngwa ọrụ ego, ngwaahịa itinye ego ma ọ bụ nchekwa, nnukwu nzọ bụ ime Bitcoin ego zuru ụwa ọnụ.
Taa, inye ego zuru ụwa ọnụ (M1) bụ ijeri dọla 7.6. Ọ bụrụ na ị gbakwunye ego nkwụnye ego, agbụ oge dị mkpirikpi, nkwụnye ego oge na ngwa ego ndị ọzọ, ọ ga-eru ijeri $ 90 dị egwu. Iji bụrụ ego zuru ụwa ọnụ, Bitcoin kwesịrị ịnwe ma ọ dịkarịa ala uru nke ego zuru ụwa ọnụ-mana nke a abụghị ikpe, n'ihi na uru ahịa Bitcoin bụ naanị $ 130 ijeri n'oge edere.
Otú ọ dị, ụgwọ ngwa ngwa na-arịwanye elu na ụgwọ mba ọzọ nwere ike ime ka ndị na-etinye ego ịmalite ịmalite ịchọ ngwa ọrụ mkpuchi nke dị mfe iji nweta ma dochie anya karịa ọla edo. Nke a nwere ike ịkwalite ọnụahịa Bitcoin n'ihi na ọ nwere ọrụ ụlọ ahịa bara uru. Iji lụso onu oriri ọgụ, ọtụtụ mmadụ nwere afọ ojuju ijide dollar, euro ma ọ bụ yen na pọtụfoliyo ha - ndị Argentina na ndị Venezuelan na-eme nke a, ha na-ejide dollar kwụsiri ike.
Nke a nwere ike iwetara ya uru bara uru: Bitcoin nwere ike iji dị ka ụlọ ahịa bara uru.
Anyị na-ahụ ya dị ka akụ. Ọ bụrụ na ọ bụ, mgbe ahụ Bitcoin bụ ezigbo ego mgbochi inflationary. Iji kpalite uto netwọk, oge ọ bụla e mepụtara ngọngọ ọhụrụ na blockchain, a ga-emepụta bitcoins ọhụrụ 50. Mgbe ọ bụla square 210,000, ụgwọ ọrụ a ga-ebelata (ugbu a na-akwụ 12.5 ụgwọ kwa square, a ga-egbutu ya ruo 6.25 na Mee 14, 2020). Dika ụkọ bu pụta ụwa na ọkọnọ ọkọnọ nke 21 nde Bitcoins, ọ bụghị ihe ijuanya na ndị mmadụ na ụlọ ọrụ ego nwere ike ịgwọ Bitcoin dị ka ego siri ike (nke a makwaara dị ka ego nchekwa)
Nke a pụtara na amụma ego nke ime na - eme ike ịzụta Bitcoin - mana kedụ ihe na - ekpebi ego ya?
Ọ bụrụ n’ịlelee ụlọ akwụkwọ ochie nke akụnụba, ị ga-ahụ na ọnụahịa Bitcoin kpebisiri ike site na ọnụ ahịa mmepụta ya. Nke a pụtara ngwaike na ọkụ eletrik. Ka Bitcoin na-aga n'ihu na-ata ahụhụ site na ngọngọ, ọnụọgụ nke ndị na-egwuputa ihe ga-eji nke nta nke nta belata n'ihi nnukwu ụgwọ ọrụ ngwupụta. Ka o sina dị, a ka nwere ụfọdụ ndị na-egwuputa ihe na-adị njikere ire bitcoin na ọnwụ, nke nwere ike igosi na mmadụ na-egbochi ịrị elu nke bitcoin n'ọdịnihu: ọnụahịa anaghị adabere kpamkpam na ọnụahịa nke mmepụta, n'agbanyeghị na ọ bụ ihe kpatara ya.
Oclọ akwụkwọ neoclassical nke akụnụba abawanye na echiche a wee gbakwunye ebumnuche ọzọ: ọkọnọ na ọchịchọ. Ebe ọ bụ na a na-ekpuchi bitcoin, ọnụ ọgụgụ nke bitcoins ndị a na-egwupụta ga-ebelata ka oge na-aga, ya mere ọchịchọ maka bitcoins nwere ike ịrị elu. Inwekwu ọchịchọ na ọnụahịa dị elu.
Dabere na ebumnobi ebumnuche eyighị ka ọ ga - ewepụtacha foto a. Ọ bụrụ na ọnụahịa mmepụta bụ isi ihe kpatara ya, mgbe ahụ uru nke Bitcoin kwesịrị ịdị nso na nnukwu ego US (M3).
N’agbanyeghi nke a, ndị na-egwuputa ihe ka na-efu, n’agbanyeghi ọnụ ahịa dị elu nke igwuputa Bitcoin.
Ọ bụrụ na nguzozi nke ọkọnọ na ọkọnọ dị mkpa, mgbe ahụ, mkpuchi doro anya nke Bitcoin ga-ekpebi mkpa siri ike. Agbanyeghị, Bitcoin ka na-adịkarị njọ ma nwee ike ịda ma dikwa elu n'otu ụbọchị.
Banye na ụlọ akwụkwọ Ọstrịa nke akụnụba, ndị na-akwado Bitcoin dị ka ụlọ akwụkwọ a nke ukwuu. Ndị ọkammụta Ọstrịa kwenyere na ego ihe ọ bụla na-ekpebi site na ihe dị iche iche, ọbụnadị gụnyere ụgwọ ọrụ. A na-ekpebi mkpa na ọchịchọ site na mmasị onwe onye. Ya mere, ọ nwere ike ịkọwa uru nke Bitcoin-uru a ghọtara na ihe gbasara nke onwe nwere ike bụrụ ihe ndị ka mkpa.
Enwere ike ịhụ na enweghị nkọwa doro anya maka ihe kpatara cryptocurrency (ma ọ bụ ọbụna ego) ji baa uru. N'okwu a, ọnụahịa nke Bitcoin yiri ka ọ bụ ụdị usoro akụ na ụba, echiche ahịa na amụma ego dị n'ime ya na-achịkwa.
Agbanyeghị, n'agbanyeghị agbanyeghị echiche mmadụ banyere akụ na ụba, cryptocurrency ka ga-eweta mgbanwe mgbanwe ego. Ọ bụrụ na ọ nwere ike ịgbanwe n'ụdị ego ọzọ nke ụwa, a ga-agbanwe usoro okike nke ụwa niile (ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, anyị amaghị).
Na njedebe, Bitcoin bụ mwepụta mpempe maka nnwale ego. Site na 2016 ruo 2017, teknụzụ blockcheni mere ka akụnụba nke cryptocurrency wee weta ụwa ọhụụ nke ọhụụ ọhụụ. Taa, anyị ga-eji echiche nke ihe akụrụngwa akụrụngwa ma chekwaa ụlọ akụ iji mụọ ego mkpuchi siri ike nke nwere ike ịkwado ọnụahịa nke otu dollar.
Kama ịgwọ Bitcoin dị ka ego, ọ ka mma ịgwọ ya dị ka usoro ịkwụ ụgwọ.
Ya mere, ezigbo uru nke Bitcoin dị na netwọkụ ya. Ka ndị mmadụ sonyere, nke ka mma. N'ụzọ bụ isi, nke a pụtara na uru nke Bitcoin dabere na onye nwe ya. N'oge a, site na ewu ewu Bitcoin (ọ bụghị maka iji ya kwa ụbọchị, mana maka itinye ego na azụmaahịa), ọtụtụ ndị chọrọ ịmata ihe amalitela ị attentiona ntị na teknụzụ ọhụrụ a. Nke a pụtara nkesa karịa.
Otú ọ dị, ka Bitcoin wee rụọ ọrụ n'ezie dịka a tụrụ anya ya, ọ kwesịrị iwepụ ndị na-egwupụta akụ na ebe a na-egwupụta akụ site na ịgbanwere usoro ihe nkwụnye ego (PoS). Usoro nyocha nke Bitcoin na-eme ka azụmahịa dị oke ọnụ-ndị na-egwuputa ihe na-emefu nde kwuru nde iji nyochaa azụmahịa Bitcoin na netwọkụ na ọkụ eletrik na ike nhazi kọmputa. Site na usoro PoS, Bitcoin ga-eji ihe bara uru n'ihi na netwọk ya. Ọtụtụ ndị nketa ga-enyefe akụkụ nke ihe ha nwere ka netwọkụ too, wee si otú a na-abawanye njide ha dịka o kwesịrị.
Ọ na-ada ụda dị mfe, mana imirikiti bitcoins taa na-abụ ndị ndị ọrụ China na-egwupụta. Ọ bụrụ na ọ nwere ike dochie (dịka ọmụmaatụ) nnukwu ego US, kedu ihe kpatara gọọmentị US ji eji ego ụwa niile nke ndị na-emegide ndị na-eme ihe ike na-achịkwa?
Ọ bụrụ na ndị isi ike achọghị, gịnị kpatara obere ọgbakọ ọgbakọ ji eso ya? Ihe mgbaru ọsọ ego ụwa nwere ike iyi ka ọ bụ nrọ nrọ, mana na njedebe, ma Bitcoin nwere ike ịrụ ọrụ ga-adabere na onye ị nụrụ ya, dị ka ebe ọ na-enweta uru ya.
btc akpa, obere akpa, mkpuchi crypto asic, eji akụrụngwa akụrụngwa crypto, antminer akpa, antbox akpa,